Zikhiphe ohlwini Design Design Page
NgoLwesibili, ngo-Mashi 11, i-2008 NgoLwesibili, Septhemba 29, 2020 Douglas Karr
Ngabhalisela umkhankaso wesinyathelo esiyinkimbinkimbi kakhulu ovela enkampanini enesipho esiphoqayo. Ama-imeyili ayengumbhalo osobala kepha wayenekhophi ende ende. Ngaso sonke isikhathi lapho ngithatha isenzo esizeni sabo, ngangithola okuqukethwe okwehlukile ngokususelwa emsebenzini wami (noma ukungasebenzi). Namuhla ngithole i-imeyili ebhalwe kahle kepha nginqume ukuyeka lo msebenzi futhi ngizikhiphe ohlwini lwama-imeyili.
Nakhu ukuthi bavalelise kanjani:
Hawu! Lona umyalezo ngemuva kwalokhu, “uyekile ukudlala ngakho-ke sesiya kwesondla elilandelayo… bheka ya!”
Ngaphandle kwe- "see ya!".
Izakhi Ezintathu Zekhasi Lakho Lokufika Lokubhalisile:
Okubhaliselwe Okusekelwa Endimeni - Nikeza ukuzikhipha ohlwini okususelwa kusihloko esikhundleni senkosi ukuphuma ohlwini. Kungaba lula njengokuthi, “Uzikhiphile ohlwini lwalo mkhankaso we-imeyili, nazi ezinye izihloko ongaba nentshisekelo kuzo:” ngokunikezwa kokukhetha ukungena kwabanye. Ungazama nokuhlanganisa isisusa sayo.
Izizathu Zokuzikhipha ohlwini - Buza Kungani! Kungani bazikhiphe ohlwini? Ingabe bekungama-imeyili amaningi kakhulu? Akwanele? Awunantshisekelo? Awukho umkhankaso we-imeyili ophelele, kwenzeka kanjani ukuthi ungabuzi ukuthi ungenza kanjani kangcono? Babonge ngokubamba iqhaza futhi baxolise uma bekhetha isizathu esithi, "uyanya!".
Izipesheli - Sebenzisa lonke lelo khasi lendawo ukuthola ezinye izipesheli! Musa ukuphonsa ikhasi elikhulu elingenalutho kulo muntu! Babelapho benentshisekelo nenhloso ngasikhathi sinye (lapho babhalisela). Kungani ungabukisi ngemikhiqizo yakho yakamuva, izinsizakalo, iphepha elimhlophe, njll. Kuthiwani ngamaphrofayili omphakathi okufanele awalandele?
Lapho ngisebenzela i-ExactTarget, ngisebenzise lesi sibonelo esijwayelekile sohlelo lonke (futhi ukumaketha kwenza ikhophi nokuklama). Leli khasi linokubonga, okufingqiwe mayelana ne-ExactTarget, isixhumanisi seDemo esenziwe ngezifiso, kanye nezixhumanisi eziya kusayithi labo lonke!
Kwesinye isikhathi ukuthengisa kuqala lapho ikhasimende noma okulindelwe kuphuma emnyango. Unethuba lokwenza isithombe esihlala njalo, ungaphuthelwa yikhasi elingenalutho!
Tags: ngqomaster zikhiphe ohlwinizikhiphe ohlwini lokufikazikhiphe ohlwini lwekhasi
Okuthile Okubi Ngale ndlela Kuza…
Mar 11, 2008 ku-1: 52 PM
Ngicabanga ukuthi ogogo nomkhulu bami asebekhulile (kodwa abakwazi ukusebenza ngewebhu) bangahumusha kanjani “basuse” (kucatshangwa ukuthi bangathola ukuthi bangazikhipha kanjani ohlwini yini. Isuswe kwi-Intanethi? Isusiwe ekuxhumekeni kwabo okusheshayo? Isuswe ekhaya labo? Ngiyazibona ngamehlo engqondo izicelo zabo zokuphelelwa yithemba zosizo….
Mar 11, 2008 ku-5: 59 PM
Ngicabanga ukuthi kungcono kunokuthi 'ucishiwe' noma 'unqanyuliwe'. 🙂
Mar 11, 2008 ku-4: 50 PM
Douglas, leli yiphuzu elihle. Ukuzikhipha kwami ​​ekubhaliseni akukubi kangako ngazo zonke izindlela, kepha nakho akumangazi. Ngibuza ukuthi kungani bezikhiphe ohlwini futhi ngiyabonga ngokufunda kwabo.
Kepha ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle ukuphinde uvakashele ikhasi ukuze ubone ukuthi babonani futhi uqiniseke ukuthi ngumyalezo ofuna ukubashiya nawo.
Mar 11, 2008 ku-8: 23 PM
Ngicabanga ukuthi “ikhasi lokuvalelisa elihle” lilungile. Kepha nginokuzingela akusizi ngalutho ngaphandle kokuthi ukhumbuza umsebenzisi ngolwazi abhalise kulo.
Imvamisa, uma othile ezihlupha ngokushaya isixhumanisi sokungabhalisi, isivumelwano esenziwe.
Ngokuya engxoxweni ebuza ukuthi kungani umsebenzisi engabhalisi, ngithanda ukubona izibalo ezithile zikakhonkolo zokuthi ngabe umsebenzisi uyayigcwalisa ifomu nokuthi bathini.
Ngokwami, lapho ibhokisi elithi “Kungani ushiya” noma imithwalo yekhasi ngemuva kokuqinisekisa izifiso zami… angilindi nokuthi ikhasi lilayishe ngaphambi kokuthi ngichofoze inkinobho yokuvala isiphequluli.
Mar 11, 2008 ku-8: 50 PM
Ngiyavuma ukuthi ukuzikhipha ohlwini kungenzeka kube yisivumelwano esenziwe - iphuzu lami ukuthi ungaqhubeka nokuzama ukwakha ubudlelwano nalowo muntu futhi ubanikeze eminye imikhiqizo noma amasevisi.
Eqinisweni, ngicabanga ukuthi indlela enhle yokuphatha ikhasi elifana naleli ukuqapha iphakethe lakho le-analytics bese ubona ukuthi bangaki abantu abahlanganyela NGEMVA kokuzikhipha ohlwini!